कसरी आफ्नै हात संग छोराछोरीको बगैचा लागि खेल उपकरण बनाउन
खेल - यो जीवन हो। यो बिना कुनै पनि तरिकामा आजको संसारमा। खेल को प्रेम राखिदिन, खेल खेल र प्रतियोगिताहरु बाल्यकाल देखि अर्को आवश्यक पर्दछ। बाल सदन - सिद्ध स्थान खेल एक नयाँ पुस्ता तालिम सुरु गर्न। यो सबै छ: कोसँग बच्चाहरु को धेरै यो राम्रो क्षेत्र, बाँकी देखि तारले खेल्न रोचक हुनेछ, र समय धेरै। मात्र कुरा हो, यो पर्याप्त सूची कहिलेकाहीं छैन। तपाईं आफ्नो हात संग छोराछोरीको बगैचा लागि खेल उपकरण बनाउन सक्छ किनभने तर, यो कुरा छैन।
Kiddies मद्दत गर्छ कि केहि आसीन जीवन नेतृत्व गर्न - यो खेल उपकरण छ। छोराछोरीको लागि आफ्नै हातले बगैचा , तपाईं धेरै फरक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एक सानो समय र हात मा झूट छन् भन्ने केही सामाग्री मात्र आवश्यक छ। आफ्नै हात संग छोराछोरीको बगैचा लागि खेल उपकरण गरिरहेको, तपाईंले आफ्नो कल्पना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी डम्बबेलनेबुला गर्छन्
तपाईं चाहनुहुन्छ रूपमा यो उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - यो गर्न धेरै सजिलो छ। एक डम्बबेलनेबुला बनाउन, यो प्लास्टिक बोतल, काठ को राउन्ड टुक्रा, टेप र केही फिलर (मटर, बालुवा वा ठीक रोडा) को मात्र एक जोडी हुनेछ।
हामी बोतल र bedplate को घाँटी काटेर। के यी वस्तुहरू ठूलो हुनेछ, कठिन यो एक डम्बबेलनेबुला हुनेछ। कट भागहरु टास्ने टेप संग आपसमा चिपके छन्। त्यसपछि प्रत्येक आधा फिलर र पेच टोपी भरिएको छ। त्यसपछि, टास्ने टेप फेरि एक काठ ह्यान्डल गर्न संलग्न डम्बबेलनेबुला को आधा प्रत्येक पक्षमा। यसले केही मिनेट मा गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा सामाग्री छ छ। यी डम्बबेलनेबुला अभ्यास हरेक दिन बाहिर सकिन्छ।
खेल उपकरण र आफ्नै हातले उपकरण: फालिएको लागि बैग
फालिएको लागि बैग - एउटा महत्त्वपूर्ण elment आउटडोर खेल र केही गृहकार्य। तिनीहरूले साधारण कपडा (प्राथमिकताको बढि बाक्लो लिन) र बालुवा को गरे। धेरै सुरुदेखि यो कपडा को ढाँचा बनाउन आवश्यक छ। झोला आकार जस्तोसुकै कुनै असर। कि पछि, तपाईं मात्र छेउमा सी र बालुवा मा भर्नुहोस्। विभिन्न ठाउँमा खेल मैदान मा hoops अलग, तपाईं खेल खेल्न सक्छन्: झोला सबै hoops गर्न हुन्छ जो उहाँले जित्यो। साथै, pouches मुद्रा सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। पाठ समयमा तिनीहरूले आफ्नो टाउको मा राखे। तिनीहरू पर्ची, उहाँले unevenly फिर्ता धारण। आफ्नै हात संग छोराछोरीको बगैचा लागि यो खेल उपकरण गर्न धेरै सजिलो छ, र खेल तपाईं यसलाई ठूलो विविधता संग आउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
बक्से कसरी बनाउने
संकेत झण्डा को रूप मा किंडरगार्टन लागि आफ्नै हातले खेल उपकरण कुनै पनि प्रतियोगिता पूरा गर्न उपयोगी छ। तिनीहरूलाई अरू सबै कुरा रूपमा सजिलो बनाउन। तिनीहरूलाई कपडा र साना काठ लाठी एक उज्ज्वल टुक्रा अनुरूप सिर्जना गर्न (skewers खानाको लागि प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ)। तिनीहरूले आकार मा आयताकार छन्। यो तीन पक्ष मा हात कपडा टुक्रा र hemmed कटौती गर्न पर्याप्त छ। पछिल्लो अन्त संग लाठी सम्पूर्ण लम्बाइ भन्दा एक पाश गर्न। सम्मिलित कि लाठी पछि। झण्डा तयार छन्! तिनीहरूले बाटो वा परिक्रमा संकेत गर्न tread को पक्ष मा प्रबन्ध छन्। तिनीहरूले जताततै धेरै, कार्यात्मक त उपयोगी छन्।
आफ्ना छोराछोरीको बगैचा लागि खेल उपकरण आफ्नै हातले: bilboquet
यो खेलौना बच्चाहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ, बनाउन र सबै भन्दा सजिलो छ। यो प्लास्टिक बोतल, बुनाई र अर्को टोपी आवश्यक हुनेछ। बाल सदन लागि आफ्नै हातले यो खेल उपकरण बनाउन हामीले पहिलो आधा मा प्लास्टिक बोतल कटौती गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं तीस सेन्टिमिटर बुनाई लागि मुद्दा कटौती गर्न आवश्यक छ। एक अन्त बोतल घाँटी (बस ढक्कन वोल्ट नट आदि खोल्नु र त्यसपछि फिर्ता स्क्रूड) संलग्न छ, र अन्य दोस्रो आवरण संलग्न छ (यस उद्देश्य को लागि यो आवश्यक यसलाई एक प्वाल बनाउन छ)। तयार Bilboquet।
कपडा को टनेल
एकदम साधारण खेल उपकरण। र यो पनि गर्न धेरै सजिलो छ। सिर्जना गर्न यो एक प्लास्टिक रिंग र कपडा को एक टुक्रा आवश्यक हुनेछ। को घन्टी व्यास सुरुङ गर्न प्रवेश को व्यास आउँदै भनेर आवश्यक गणना। पहिलो stapled क्यानभासमा को अन्त्य - त यो सिर्फ फ्लैट गलियारे बाहिर जान्छ। त्यसपछि प्लास्टिक र्याप सिलना। अब यो एक परी कथा को एक जादुई टनेल जस्तै हो। लग इन एक नयाँ वर्षको वर्षा वा रंग रिबन संग सजाया गर्न सकिन्छ। बच्चाहरु एक स्तम्भ खडा र प्वाल मार्फत एक पास। नियम, यो सकारात्मक भावना धेरै हुन्छ। यो खेल छोराछोरीले आन्दोलनहरु समन्वय गर्न र संलग्न स्पेस नडराऊ सिक्न मद्दत गर्छ।
बादलले मा प्राप्त
धेरै सरल, तर रोचक "सवारी।" यसलाई बनाउनको लागि, तपाईं धेरै आवश्यक छैन: केवल चित्रकला कागज र कैंची छ। कागज ठूलो क्लाउड बाहिर कटौती। यो एक ठूलो र चिटिक्क प्वाल गरेको छ। यस्तो बादल को माछा मार्ने लाइन मा छत देखि हङ वा हार्ड कुरा मा दुबला। उद्देश्य छेद मा टेनिस लागि बच्चाहरु को लागि बैग वा फालिएको बल राख्नु हो। यो बच्चाको चपलता र marksmanship विकास गर्न मद्दत गर्न एक रोचक प्रतिस्पर्धा छ।
ग्याँस हीटर पाल: सुविधा र रुचि को उपकरण को लाभ
Volvo कार ( "volvo") दायरा, फोटो
अनुहार मा फोडे। तिनीहरूले कहाँबाट?
ओवन मा मैकेरल
जागिर साक्षात्कार समयमा आफ्नो हातले के गर्न
म एक चक्कु किन हुन सक्दैन? को संकेत र विभिन्न व्याख्याहरु को अर्थ
Troyekurov र Dubrovsky: नायक को तुलनात्मक विशेषताहरु